Tuesday, 27 Nov, 2018 1:46 PM
‘फेसन’ अर्थात् ‘जीवनशैली’ सँग प्रत्यक्ष जोडिएको सौन्दर्य व्यवसाय ‘ब्यूटीपार्लर’ हरु राजधानीमा च्याउजस्तै खोलिएका छन् । तर, यही फस्टाएको व्यवसायले सयाँै महिला आत्मनिर्भर भएका छन् । यस्तै, आत्मनिर्भर हुनकै लागि धरानकी ब्यूटीसियन स्मृति सुब्बाले ‘तरेमा ब्यूटीपार्लर एण्ड टे«निङ सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएकी हुन् । पाँच वर्षअघि एक स्कुलको जागिर छाडेर सौन्दर्य व्यवसायी अँगालेकी स्मृति भन्छिन्, ‘जागिर खान मन नपरेर पार्लर खोलेकी हुँ ।’ चावहिल मित्रपार्कमा सञ्चालनमा ल्याएको उक्त पार्लरमा आफूमात्र नभएर स्मृतिले केहीलाई रोजगारीसमेत दिएकी छन् । ‘मिसेस नेपाल आइकन–२०१७’मा ‘मोस्ट परफ्याक्ट’ उपाधिसमेत पाएकी ब्यूटीसियन स्मृतिसँग दृष्टि साप्ताहिकको जम्काभेटः
ब्यूटीपार्लर व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ ?
राम्रो छ । अधिकांश मान्छेहरुमा सुन्दर बन्नुपर्छ भन्ने सोच आएकाले पनि पार्लर व्यवसाय फस्टाएको हो । यहाँ दिनदिनै पार्लर र स्पाहरु खोलिँदैछन् । तैपनि ग्राहक उत्तिकै बढिरहेका छन् ।
गल्ली–गल्लीमा पार्लरहरु खोलिएका छन् । प्रतिस्पर्धा चर्कै होला नि ?
हो, एकदमै प्रतिस्पर्धा छ । तर, प्रतिस्पर्धाले गर्दा नै पार्लर व्यवसायिक सुध्रिँदै गएको छ किनकि, बजारमा कडा प्रतिस्पर्धा भएपछि ग्राहकले गुणास्तरीय सेवा पाउँछन् । जहाँ राम्रो सेवा सुविधा हुन्छ, ग्राहक त्यहीँ जान्छन् ।
तपाइँ सौन्दर्य व्यवसायमा कसरी लाग्नुभयो ?
सुरुमा आफ्नै लागि भनेर ब्यूटीसियन कोर्ष गरेकी थिएँ किनकि आफ्नो लागि शृंगार आफैँ गर्न सकुँ । त्यही सोचले ‘धरान ब्यूटीपार्लर टेनिङ सेन्टर’मा बेसिक कोर्ष लिएकी थिएँ । त्यही समयमा काठमाडौं आएँ । यहाँ आएपछि एउटा स्कुलमा एकाउन्टेन्टको जागिर सुरु गरेँ । तर, मलाई स्कुलको जागिर मन परेन । बरु आफैँ पार्लर खोलेर आत्मनिर्भर हुनपर्छ भन्ने सोचले तरेमा ब्यूटीपार्लर एण्ड टे«निङ सेन्टर खोलेकी हुँ ।
कति लागतमा पार्लर व्यवसायी सुरु गर्नुभएको नि ?
खासै, धेरै खर्च गरिनँ किनकि, सुरुमा पार्लरसम्बन्धी त्यति ज्ञान थिएन । विस्तारै सिक्दै जाने र बढाउँदै जाने सोचले सुरु गरेकी हुँ । त्यो बेला त्यस्तै ४ लाख रुपैयाँ लगानीमा सुरु गरेकी हुँ ।
ब्यूटीपार्लरको आम्दानी कस्तो छ ?
मलाई यही पार्लरबाट पुगेको छ । कोठा भाडा तिरेर उभ्रिएको आम्दानीले खान, बस्न, लाउनदेखि लिएर स्टाफलाई दिन सबै पुगेको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने पार्लरबाटै आत्मनिर्भर छु ।
‘तरेमा ब्यूटीपार्लर’को विशेष सेवाचाहिँ के हो ?
यहाँ ब्यूटीसियनसम्बन्धी सबै सेवा विशेष नै हो । राजधानीमा भएकाले पार्लरहरुले के–के सेवा दिन्छ, ती सबै यहाँ दिइन्छ । तर, हामी महिलाका लागि मात्र सेवा दिँदै आएका छौँ । यसबाहेक यहाँ ब्यूटीसियन ट्रेनिङ दिइन्छ । साथै, तरेमा ब्यूटीपार्लरले होम सर्भिस सेवा पनि गर्छ । तर, त्यसको छुट्टै चार्ज लिन्छाँै ।
तपाइँको पार्लरमा के–कस्ता ग्राहक आउँछन् ?
यहाँ विद्यार्थी, गृहणीदेखि लिएर सेलिब्रेटीसम्म आउँछन् । अभिनेत्री तथा मोडल अनु शाह, सम्पदा बानियाँ, गायिका जुन रिजाल काफ्लेहरु मेरा रेगुलर कस्टमर हुन् । बेला–बेला अरु पनि नेपाली सेलिब्रेटीहरु आउँछन् यहाँ ।
पार्लर व्यवसायको ‘सिजन–अफसिजन’ हुन्छ नि, होइन ?
हो, यो जाडो मौसम अफसिजन हो । विवाहको मौसमचाहिँ पार्लर व्यवसायीको सिजन हो । विवाहको मौसममा त आराम गर्ने समय समेत हुन्न । यो वर्षको सिजन अब आउँदै छ ।
ब्यूटीसियनको नाताले भन्नुपर्दा ‘सुन्दरता’ भनेको के हो ?
सुन्दरता दुई किसिमको हुन्छ । हामीले दिने र गर्ने सुन्दरता भनेको कृत्रिम हो । जसले आवरणलाई मात्र सुन्दर देखाउँछ । वास्तविक सुन्दरता भनेको मन हो । सुन्दर मन र सकरात्मक विचार नै ‘नेचुरल ब्यूटी’ हो ।
तपाइँ आफैँचाहिँ कतिको शृंगार गर्नुहुन्छ ?
बाहिर निस्किँदा गर्छु । कस्तो कार्यक्रम र स्थानमा जाँदैछु, त्यो सुहाउँदो मेकअप गर्छु । तर, मलाई नेचरल ब्यूटी मनपर्छ ।
​सिंगलमै खुसी छु- मिलन नेवार, गायिका